हामी विदेशीहरूको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्नु हुँदैन | छलफल
हामी विदेशीहरूको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्नु हुँदैन
– महेश बस्नेत, पूर्वमन्त्री तथा सांसद, नेकपा
नेकपाको शक्तिशाली सरकारले देश र जनताको हितमा काम गरेन भन्ने चर्चा व्यापक भइरहेको छ, पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति र नेकपाको सरकारलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा पहिलोपल्ट दुई तिहाई हाराहारकिो बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अवस्था जुन बन्यो त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभूतपूर्व पार्टी एकीकरणको अभियानले काम गरेको देखिन्छ । पार्टी एकीकरणपश्चात पार्टीपंक्तिको सम्पूर्ण एकताका काम तोकिएको समयमा पूरा हुन ढिलाइ हुँदा र ठूलो पार्टीलाई समयमै चुस्त दुरुस्त बनाउन नसक्दा पार्टीमा विभिन्न समस्याहरू देखिँदै आएका थिए । त्यतिमात्र होइन, पार्टीका भेला बैठकहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा, त्यसलाई वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा प्रशिक्षण दिन नसक्दा र सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचारप्रसार जनतामा पार्टी कमिटीमार्फत बेलैमा लैजान नसक्दा एवं विरोधीहरूको भ्रम र दुस्प्रचार चिर्न बेलैमा नसक्दा पार्टीमा अनेक खालका समस्या आउँदा रहेछन् । हामीभित्र भएको सानोतिनो संक्रमणलाई बेलैमा उपचार नगर्दा जसरी शरीरभरि रोगका संक्रमणहरू फैलिएर जीवन नै जोखिममा पर्छ त्यस्तै संकट र जोखिम अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि भएको छ । त्यो आँफैभित्र र बाहिरबाट दृष्य अदृष्य रूपमा भइरहेको छ । कतिपय नेकपाको बढ्दो र फैलँदो लोकप्रियता र शक्तिलाई मन नपराउने देशी विदेशी शक्तिहरू अहिले सल्बलाई रहेका छन । चाहे त्यो आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा होस् वा मिचिएको आफ्नो मुलुुकको भूमि फिर्ता ल्याउने अभियानका विरुद्धमा होस् वा सरकारले गरेका राम्रा कामका विरुद्धमा होस् यिनै शक्तिहरू घोषित अघोषित रूपमा हाम्रो पार्टी र सरकारविरुद्ध लागिरहेका छन् । यसैमा हाम्रो आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि त्यस्तै छद्म वैरीहरूले सुँड घुसाएका छन् । त्यही अहिले आएर हाम्रो पार्टीमा प्रकट भएको छ तर यो निश्चय नै पराजित हुन्छ । किनकी राष्ट्रियताको सवालमा होस् वा विकास निर्माणको सवालमा होस्, जनताको हितमा होस् वा पार्टी निर्माण र विस्तारमा होस् वा मुलुक समृद्ध बनाउने महाअभियानमै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहासमा नभएका काम गर्नुभएको छ । जताततै राजमार्ग र बाटाहरू बनेका छन्, पक्की पुल र झोलुङे पुलहरू बनेका छन् , विमानस्थलहरू निर्माण र स्तरोन्नति भइरहेका छन् । सानासाना स्टिमर र सानातिना पानीजहाज चल्न थालेका छन्, अब रेल चल्ने दिन आउन लागेको छ । सबै देशहरूसँग परराष्ट्र« सम्बन्ध उच्चस्तरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । ६२ वर्षदेखि मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने हिम्मत कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्न सके ? नेपाल भूगोलमा सानो भए पनि सार्वभौमिकतामा सबै मुलुक समान हो भनेर विश्वलाई देखाउने काम प्रधानमन्त्री ओली सरकारले ग¥यो त्यो अरू कसैले गरेको थियो ? थिएन । त्यस्तै भारतवेष्टित मुलुकलाई भूपरिवेष्टित यही सरकारले बनायो । यो काम अहिलेसम्मका कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्ने हिम्मत गरेका थिए ? थिएनन् । चीन सरकारसँग पारवहनदेखि व्यापार यातायात र रेल सञ्चालनको सम्झौता गर्न सफल भयो । यो काम कुनै प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए ? थिएनन् । यो सरकारले जनहितविपरीतका कुनै काम गरेको छैन । एमसीसीका बारेका सरकारलाई दोष लगाइएको छ जुन नेपाली कांग्रेसको सरकारले सम्झौता गरेको हो जहाँ तत्कालीन माओवादीका नेता हालका नेकपाका बहालवाला नेता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यो बेला सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो सरकारले त्यो पहिलेको सरकारले गरेको सम्झौताको निरन्तरताको कुरा मात्र गरेको हो, त्यो पनि राष्ट्र«हितमा हुने गरी मात्र वा कार्यदलले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गरेर भनेको हो । कोरोना को विषयमा सरकारले अति नै संवेदनशीलताका साथ अति नै सचेतताका साथ काम गरिरहेको छ, जसका कारण विश्वका शक्ति सम्पन्न मुलुकलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाइरहेको कोरोना महामारीबाट तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कम मानिस पीडित छन् । यो पनि सरकारको सकरात्मक नै काम हो । तर यसमा पनि ओली सरकारलाई दोष दिइरहेका छन् । जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, यो अहिलेको सरकारले न्यूनीकरण गरिरहेको छ, भ्रष्टाचारीलाई खोजी खोजी कारबाही गरिरहेको छ । भारतबाट नयाँ संक्रमित आएकाले केही समस्या भयो भन्दा भारतलाई गाली ग¥यो भन्ने गरिएको छ,नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर आफ्नो मुलुकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न खोज्दा दिल्लीलगायत भारतीय मिडियामा सरकार हटाउने धुनहरू गुन्जिन्छन् । त्यो कुरा गर्दा किन यसो गरेको ? किन यसो भनेको भनेर पार्टीभित्रै बबण्डर गर्नुपर्ने कारण नै छैन । मुख्य कुरा के हो भने सिंह सुतेको बेलामा कुकुरहरू भुक्छन्, जब सिंह ब्युँझन्छ तब कुकुरहरू भुक्न छोडेर लुक्छन् । नेकपाको अहिलेको अवस्था यही हो । पार्टी अध्यक्ष जागरणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । उहाँलाई साथ दिने हामीजस्ता युवा सयौं छौंं, उहाँले अहिलेसम्म धेरै सहेको जस्तो लाग्छ । अब धेरै भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जुन कुरालाई प्रम ओलीले कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ । यी सबै कामको रफ्तारलाई हेर्दा नेकपाको सरकारले मुलुक र जनताको हितलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
तपाईंले भनेका यी सबै काम पूरा गर्ने त पार्टीको पनि सहयोग चाहिएला पार्टी एकताबद्ध किन हुन सकिरहेको छैन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सोरको ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अधियानमा अध्यक्ष तथा प्रम ओलीको जुन सोच, विचार,भिजन,सैद्धान्तिक ज्ञान,दृष्टिकोण,इच्छाशक्ति र मिसन छ त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टी र सरकारका संयन्त्रहरूको सपोर्ट उहाँलाई जुन मात्रमा चाहिने हो त्यो पाइरहनुभएको छैन । किनकी उहाँका समकक्षी नेताहरू पूर्वप्रधानमन्त्री तीनजना हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एभरेजमा काम गर्नुभयो धेरै उत्कृष्ट काम गर्न सक्नुभएन । तर केपी ओलीले उत्कृष्ट काम गर्न थाल्नुभयो । यो पूरा हुन पायो भने उहाँभन्दा हामी धेरै तल हुन्छौंं र हाम्रो भविष्य ओझेलमा पर्छ भन्ने सोचले काम ग¥यो र उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएर असफल बनाउन लाग्नुभएको छ भने कतिपय कमिसनखोर राज्य संयन्त्रका मानिसहरू पनि केपी ओलीको अभियानलाई साथ दिँदा कमिसन खान पाइँदैन, आफू सुध्रिनुपर्छ बरू अर्कै कित्ताको निर्देशन पालना गर्दा आफ्नो उद्देश्य पूरा हुन्छ, कमिसनको बाटो खुल्छ भनेर सरकारको उद्देश्यविपरीत काम गरिरहेका छन् । अर्को कुरा, उहाँका वरिवरि बसेर उहाँलाई भ्रम पारेर तर मार्न पल्केकाहरूले पनि उहाँको उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेका छैनन् । यसलाई उहाँले गम्भीरताका साथ समीक्षा गनुुपर्छ । वर्तमान प्रम देश र जनताका लागि इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने राजनेता हुनुहुन्छ तर उहाँको अधिकांश समय पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड,वरिष्ठ नेताद्वय, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत अन्य रिसाइरहने नेताहरूलाई फकाउँदैमा खेर गइरहेको छ । कहिले को रिसाएको हुन्छ, कहिले को रिसाएको हुन्छ, एउटालाई फकायो अर्को निहुँ खोजेर रिसाउँछ । उस्लाई फकायो, अर्को उसलाई फकाउने भनेर रिसाउँछ । यसैगरी उहाँको समय त्यसै खेर गइरहेको छ । उहाँको समय पार्टी नेतालाई फकाउँदा र राज्य संयन्त्रले पारेको फोहोर सफा गर्दैमा त्यसै खेर गइरहेको छ, कामै गर्न पाइरहनुभएको छैन । प्रचण्ड कमरेडले पार्टी राम्ररी सञ्चालन गरिदिएको भए, देश दौडाहामा कुदेर पार्टी एक ढिक्का बनाइदिएको भए उहाँले फुलफेजमा राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न पाउनु हुनेथियो । त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसमा राम्ररी काम गर्न नसकेका नेताहरूमा प्रम ओलीका अगाडि आफू पछि पर्ने डर र इगोले काम गरिरहेको छ । अर्थात, पार्टीका अन्य नेताको स्प्रिट र प्रम ओली र उहाँका टिमका मन्त्रीहरूको स्प्रिट एउटै नहुँदा प्रम ओलीको टिमले गाडा तानिरहने उहाँहरू अगाडि बढ्नुको सट्टा पछाडि धकेल्दिने कुराले पार्टी र सरकारमा असन्तुलन भइरहेको छ । यसैको मार र असर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टिमलाई परिरहेको छ । यसको अन्त्य चाँडो हुनुपर्छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने, पार्टीलाई असहयोग गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई नमान्ने,भारतीय स्वार्थमा काम गरेर राष्ट्रवादी सरकारलाई हटाउन षड्यन्त्र गर्ने अराजकतावादीहरूलाई गम्भीर समीक्षा गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यसमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुट्टा नकमाइकन निर्मम ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ ।
अहिलेको पार्टीभित्रको समस्या कसरी हल हुन्छ त ?
मैले माथि भनेका सरकारविरोधी गतिविधि गर्नु भएन, देश,जनता र पार्टी हितमा काम गर्ने सरकारलाई साथ दिनुप¥यो, विदेशीको बुई चढ्नु भएन, ५७ वर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको अभियानलाई खुलेर सहयोग गर्नु प¥यो, पार्टी एकता भाँड्ने काममा लाग्नु भएन, आफ्नो जेजे जिम्मेवारी छ,त्यो पूरा गर्नु प¥यो, स्वास्थ्यको प्रतिकुलताका बावजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ घण्टा काम गर्ने, स्वस्थ नेताहरू ४ घण्टा काम नगर्ने ? काम नगर्ने मात्र होइन, सरकारको काम बिगार्दै हिँड्ने, सरकारलाई कामै गर्न नदिनेजस्ता काम गर्नु भएन । सरकारका राम्रा काम जनतामा लैजानु प¥यो, विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्धमा निर्मम ढंगले लाग्नु प¥यो, सरकारलाई फुलफेजमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु प¥यो । सरकारले देश र जनताका हितमा गरिरहेका विकास निर्माण र समृद्धिको अभियानलाई साथ र सहयोग गर्नु प¥यो, पद पाइएन भनेर अनावश्यक कुरामा पार्टीभित्र विवाद र किचलो झिक्नु भएन, एकताबद्ध पार्टी निर्माणको अभियानमा युद्धस्तरमा लाग्नु प¥यो । जताततै विद्यालय, विश्वविद्यालय,अस्पताल,राजमार्गहरू, विमानस्थलहरू, पुलहरू,मन्दिरहरू बनिरहेका छन्, कृषिमा आधुनिकीकरण भइरहेको छ, यान्त्रिकीकरण गर्नु पर्ने छ, शिक्षालाई उच्च प्राविधिमैत्री बनाउनु पर्ने छ, जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागिरहेको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर आइरहका छन् । यस्ता विषयहरूमा सहयोग र साथ दिनुप¥यो, पूँजीवादउन्मुख पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई त्यही स्तरमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नु प¥यो । यसो भएको खण्डमा यी सबै बेथितिहरू समाप्त भएर जानेछन् र देश समृद्ध बन्ने छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओली सफल हुनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिले देखिएको संकट मोचनका लागि यो सब सम्भव छ त ?
किन सम्भव छैन,असम्भव के छ र ? पार्टीको हितमा, जनताको हितमा र देशको हितमा काम गर्न किन असम्भव ? यो सब सम्भव हुने कुरा हो । सम्भव नहुने भन्ने कुरै छैन । अहिलेको विवाद समाधान भनेको दुई अध्यक्ष मिल्ने र सिंगो नेकपाको टिमलाई अगाडि बढाउने हो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुषकमल दाहाल प्रचण्ड सफल हुनुहुन्छ । किनकी उहाँहरू भनेको दुवैजना लामो समय जेल बसेर ठूलो त्याग गरेर मृत्युलाई जितेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ । सानोतिनो स्वार्थमा रमाइहाल्ने विरोधीको षड्यन्त्रमा फसिहाल्ने खालको नेतृत्व होइन । उहाँहरूलाई देश, जनता र पार्टीप्रतिको जिम्मेवारि राम्ररी थाहा छ । त्यसैले निहित स्वार्थमा लागेर आफ्नै सरकारलाई ढाल्ने, पार्टीलाई कमजोर पार्ने खेलमा सामेल हुनुहुन्न, सोच विचार गरेर दूरदर्शी दृष्टिकोणका साथ, सहमतिका साथ एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । योभन्दा अर्को विकल्प छँदा पनि छैन र सोच्ने कुरा पनि हैन । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहिँ तलबितल हुनुहुन्न । यो मैले उहाँमा पाएको र देखेको तस्बिर हो,यथार्थ हो । यदि यसमा अर्का अध्यक्ष चुक्नुभयो, देश,जनता र पार्टीविरोधी गतिविधिमा लाग्नुभयो भने जनता र इतिहासले क्षमा दिनेछैन । यो कुरा यति पाको हाम्रो नेतृत्वलाई थाहा नहुने कुरै छैन । तर परिस्थितिलाई केही मिडियाले अतिरंजित रूपले बङग्याइदिने, सरकारविरोधी समाचार प्रचारप्रसार गरिदिने गरेका कारण सरकारका काममा समस्या भइरहेको छ । हाम्रो समाज भ्रममै जन्मिने, भ्रममै हुर्कने र भ्रममै मर्ने र सरकारविरोधी मिडियाले ठीक यही काम गरिरहेको अर्थात भ्रम छरिरहेको हुनाले यसमा सरकारले सचेतता चाहिँ अपनाउनै पर्छ
एमसीसीको विषय के हो ?
अमेरिकी च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अघिल्लो अर्थात कांग्रेसको सरकारले सम्झौता गरेर ल्याएको अल्पविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी परियोजना हो । हाम्रो देशमा यो परियोजना विद्युत प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन र स्टेशनहरू निर्माण गर्ने कामका लागि खर्च गर्ने अर्थात विद्युतीकरणको लागि खर्च गर्ने कुरा सरकारले गरेको थियो । तर भ्रम छर्ने र सरकारका आलोचकहरूले यो बीआरआईका विरुद्ध इण्डोप्यासेफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गत ल्याएको हो । अब यो आयो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर स्याल हुँईया गरी यो परियोजनालाई विवादित बनाइएको छ । तर, त्यो होइन । फेरि यो परियोजना यो सरकारले ल्याएको पनि होइन । तर यसलाई मानिसहरूले बुझ्दै नबुझी विरोधीको भ्रममा परेर यो सरकारले ल्याएको राष्ट्र«घाती काम भन्दै सरकारको विरोध गर्ने तुरुप बनाएका छन् । यो हुँदा पनि राष्ट्रहितमा हुने गरी संसद्ले अनुमोदन गरेर काम गर्ने कुरा हो । यो अहिले संसद्को विचाराधीन विषय भएको छ । यसको बारेका कार्यदल बनिवरि कार्यदलले रिपोर्ट पेस गरिवरि सबै स्पष्ट भइसकेको कुरा हो । यसमा सरकारलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन र यसमा सरकारको कुनै स्वार्थ पनि छैन । तर हाम्रा असल छिमेकी र दातृ मुलुुकलाई पनि हामीले तोड्न मिल्दैन । परियोजना सञ्चालन नै गर्नु पर्दा उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर स्पष्ट भएर परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर यो विषय अहिले तत्कालको विषय होइन, छलफलको विषय हो ।
तपाईं संघीय सांसद भक्तपुरको विकास निर्माणको सन्दर्भमा केलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ?
मैले भक्तपुरको संघीय सांसदको रूपमा काम गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो जिल्ला भनेको वर्षमा पाँच करोड पनि बजेट नआउने जिल्ला हो । म संघीय सांसदको रूपमा निवार्चित भएपछि दुई वर्षमा ४ अर्बभन्दा बढी बजेट ल्याएर हामीले विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौंं । हिजो हामी निर्वाचनको दौरानमा जनताको घरमा जाँदा उहाँहरूले सडक, ढल र खानेपानी गरी तीनवटा विषयको माग गर्नुभएको थियो । यसर्थ स्वभाविक रूपले भौतिक निर्माणका यिनै विषयहरू हाम्रा पनि माग बने र यसै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी काम गरिरहेका छौंं । यसमा हामीले ९० प्रतिशत काम खानेपानी, सडक, पुल, ढल, विद्यालयलगायतका भवन निर्माणमा खर्च भएको छ । पछिल्लो समयमा खासगरी कोरोनाको महामारी आएपछि अब कृषि क्षेत्रको विकास, विविधिकरण,यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणमा लाग्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र कृषिलाई पर्यटनमा जोडेर कृषि पर्यटनको विकासमा लाग्नुपर्छ, त्यसमा टेवा पुग्ने खालका वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं, सोच बनाइरहेका छौंं । अहिलेको सरकारको बजेटमा पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको छ । यसबाहेक जनताका माग, आवश्यकताअनुसार दुुई अर्ब ८१ करोडमा हनुमन्ते करिडोर बनाइरहेका छौं । त्यसैगरी मनहरा करिडोर झण्डै दुई अर्ब बढीमा बनाइरहेका छौं । त्यसैगरी वीर अस्पताल, दुईवटा स्मार्ट सिटी, गट्ठाघरमा ५ हजार क्षमताको कन्भेन्सन हल बनाउँदै छौं । प्राणी उद्यान केन्द्र, रंगशालालगायत ठूलाठूला भौतिक संरचना बन्दैछन् । बाटाघाटा छदेखि दश मिटरसम्मका चौडा बनाएर पिच गरिरहेका छौं । यसले भक्तपुरमा विकासको लहर आएको छ, अब केही दिनपछिदेखि यहाँ पुराना अस्पताल र स्कुलहरू हुने छैनन्, सबै नयाँ बनाइने छ । अब दुई वर्षपछि भक्तपुरमा सडक र पुल बनाउनु नपर्ने अवस्था बनाउने छौं, भित्रि बाटोहरू मात्रै बनाइने छ । यहाँका डाँडाकाँडामा भ्यू टावरदेखि हरितगृह, बगैँचादेखि लिएर हाइटेक प्रविधिका कृषि फर्म, फुड टेक्नोलोजी भवन र शीतभण्डार भवनहरू समेत निर्माण गरिने छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने अब भक्तपुर विकासको स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको छ र यो भक्तपुरवासीका लागि गौरवको कुरा हो ।